Arimaha Jaceylka Kuwa ugu xiisaha badan - Cishqi.com
Arimaha Jaceylka Kuwa ugu xiisaha badan
Arimaha Jaceylka iyo waxtarka nolosha
Arimaha jaceylka, waa maxay jaceylka, sidee jaceyl qof loogu abuuro, su,aalahaasi iyo suaalo kale oo ku saabsan arimaha jaceylka kala soco boggeena cishqi, Somali Blog.
Airmaha jaceylka Kuwa ugu xiisaha badan
Markaad dhalinyaro tahay waxaad xiiseyneysaa inaad wax ka ogaato arimaha jaceylka gaar ahaan kuwa shukaansiga. Sabab? Sababtoo ah waxaad jeclaaneysaa inaad sameysid nolol. Markii aad rabto inaad sameysato lamaane waxaad u baahan tahay inaad hesho qof, qofkaasoo aad dooneyso inaad nolosha la wadaagto.
Dadkii hore Iyo dadka maanta
Waagii hore dadka ma xiiseyn Jirin jaceylka, why? Waayoo ninka raga ah markuu ka helo gabar waxa uu u tagi jiray reerkeeda, waana loo guurin jiray. Haddii ay raali ku tahay iyo haddii kale waxa la dhihi jiray ninkaan ayaa ku soo doontay, waana kula jeclaanay inaan kuu guurino.
Arimaha Jaceylka iyo dadka hadda
Jiilka cusub ee hadda jiro waa kuwo ka duwan jiilkii hore. Waxa ay rabaan wax walbaa in ay ku dhisnaadaan jaceyl iyo farxad. Waxa ay aaminsanyihiin in noloshu aysan dhadhan lahayn jaceyl la,aantii. Sidaa darteed ayeeyna u xiiseeyaan in wax kala socdaan maqaalada jaceylka ah kuwa ugu xiisaha badan.
Qishj: Qormooyin ku saabsan arimaha guurka
Arimaha jaceylka iyo shukaansiga
Markaad rabto inaad wax shukaansato kaliya uma baahnid erayo jaceyl ah oo kaliya ee waxaad u baahantahay inaad taqaano sida loo soo jiito qofka, sheekooyin iyo hadalo kaftan ah.
Ka soo qabo waxaad isbarateen gabar/wiil Somali ah, isbarasho kadib waxaad go,aansateen inaad xiriir sameysaan kadibna aad kulantaan. Waad isa soo hor fadhisateen, suaashu waxay tahay maxaad u sheegeysaa lamaanahaaga?
Markaadan jaceylka dhabta ah waxba ka aqoonin waxaa kugu adkaanayo shukaansiga, kaftanka iyo sheekada. Hadaba boggeena waxaad kala socan doontaa dhacdooyinka aduunka, kalmadaha jaceylka, erayada shukaansiga ah iyo sida loo soo jiito lamaanahaaga iwm.
Qish: Baro sida loo muujiyo jaceylka xaaskaaga
Halkani sidoo kale waxaan kugula wadaagi doonaa kalmadaha jaceylka gaar ahaan kuwa qalbiga taabanayo. Bogeena Cishqi Somali Website wuxuu kaa saacidi doonaa baahida ah inaad wax ka ogaato wax kastaa oo ku saabsan jaceylka iyo shukaansiga maanta. Hadaba ku soo dhawoow boggeena.
Talo iyo Su’aalo
Haddiii aad qabto su’aalo ku saabsan Jaceylka waxaad xaq u leedahay inaad nala soo xiriirto waxaana kaa caawi doono Cishqi Team. La xiriir Teamka
Qiso jaceyl dhab ah: Qisadani waa qiso jaceyl oo murugo leh kana mid ah qisooyinka jaceylka ee aan rabno inaan la wadaagno akhristayaasheena. Waa qiso
Cishqi Team June 18, 2022
Erayo habeen wanaagsan ah oo qalbiga taabanayo
Marka hore habeen wanaagsan haddii ay habeen kuu tahay, marka xigta ku soo dhawoow erayo habeen wanaagsan ah oo aad u diri karto lamaanahaaga gaar
Cishqi Team May 2, 2022
Khadar iyo Fartuun Xarrago: Sheeko xiiso leh
Xarrago iyo Khadar: Sheeko xiiso leh, Khadar waa wiil yar oo 22 sano jir ah. Khadar wuxuu ku dhashay magaalada Garowe ee caasimada Puntland, laakin
Cishqi Team April 26, 2022
Sida loo soo jiito qofka aad jeceshahay waa wax fudud, kaliya u diro erayo jaceyl oo dareen leh gaar ahaan kuwa soo socdo oo kale.
Cishqi Team April 9, 2022
Qiso jaceyl: Ma aanan ogeyn waxa iga maqan
Muqdisho (Cishqi.com) – Akhriso qiso jaceyl gaar ahaan qiso xanuun badan oo murugo iyo jaceyl isugu jiro waxayna u dhacday sida soo socoto. Aan kula
Cishqi Team January 27, 2022
Dhambaal Jaceyl Oo Raali Galin Ah
Waxaad dooneysaa inaad raali galiso qof aad jeceshahay una dirto dhambaal jaceyl oo raali galin ah, hadaba waxaad joogtaa halka saxda ah. U dir qofka
Cishqi Team January 3, 2022
Jaceyl Waa Dareen: Nimcaan iyo Canab
Nimcaan iyo Canab, jaceyl waa dareen, waxaan ku ogaaday in jaceylka uu yahay dareen marka aan isweydiiyay waa maxay dareen jaceyl? Ka hor inta aanan
Cishqi Team January 1, 2022
Nayroobi (Cishqi) – Xushmad jaceyl oo ah maqaal aad u cajiib ah, waa maqaal sito erayo sarbeeb ah oo jaceyl ah, intaa waxaa sii dheer
Cishqi Team December 21, 2021
Muqdisho (Cishqi) – Shukaansi bilow ah qeybtii koowaad, Shukaansi waa wax loo baahan yahay, noloshu bilaa shukaansi waa uun iska nolol, macnaha nolol iska caajis
Cishqi Team December 15, 2021
Jaceylka Xaaskaaga: Baro Sida Loo Muujiyo Si Fudud
Muqdisho (Cishqi) – Inaad muujiso jaceylka xaaskaaga waa wax fudud, balse waa haddii ay dhab kaa tahay, muujinta jaceylka xaaskaaga uma baahno wax sidaa u
Cishqi Team December 5, 2021
Waa maxay Jaceyl? Akhriso Qormo Xiiso Leh
Marar badan marka aad isweydiiso waa maxay Jaceyl, waa maxay kalsooni jaceyl, Waa maxay farxad jaceyl hadana aadan si sax ah ugu jawaabi karin waad
Cishqi Team October 30, 2021
Jaceyl Dhab Ah Sida Loo Dareen Siiyo Xaaskaaga
Mogadishu Somalia ( Cishqi ) In aad xaaskaaga dareen siiso jaceyl dhab ah waa wax aad u fudud, waxaad u baahan tahay oo kaliya in
Cishqi Team August 26, 2021
Sida Loo Soo Jiito Gabadha Aad Jeceshahay
Baro sida loo soo jiito gabadha aad jeceshahay, marka aad gabar jeclaato misana aadan aqoonin sida loo kasbado qalbigeeda waa dhibaato weyn laakin don’t worry.
Cishqi Team August 24, 2021
Wiilka ku jecel: 8 kamid ah calaamadaha lagu garto
Mogadishu ( Cishqi ) – Waxaad aragtay wiil ku jecel laakin ma hubtid in ay dhab ka tahay iyo in kale, hadaba sidee u ogaan
Cishqi Team August 14, 2021
Mogadishu (Cishqi) – U dir jaceylkaaga erayo calaacal jaceyl oo qoraal ah gaar ahaan kuwo murugo, dareen, calool xumo iyo xanuun badan leh. Calaacal jaceyl
Cishqi Team August 2, 2021
Garowe (Cishqi) – riyada qof aad jeceshahay oo aan ku rabin waa dareen nuucaan ah, waxaad iswedydiineysaa sida ay ku dhacday laakin no jawaab. Inaad
Cishqi Team July 30, 2021
Maxaa lagu gartaa qofka ku neceb ama aanan kaa helin, ma jiraan calaamado lagu garto qofka ku jecel ama ku neceb? Jawaabtu: waa mid fudud.
Cishqi Team July 28, 2021
Muqdisho (Cishqi) – Maxay jecelyihiin dumarka? Waa kuwee dumarka raga ay jecelyihiin ama ay ka helaan, jawaabtu waa mid fudud. Marka la isweydii waa kuwee
Cishqi Team July 26, 2021
Dumar fara badan waxaa ku adag raali galinta ninka halka kuwa qaar ay xagoogda ka tahay wax fudud, hadaba sidee loo raali galiyaa ninka? Muqdisho
Cishqi Team July 25, 2021
Waan Ku Jechalay sida loo dhaho lamaanahaaga
Muqdisho (Cishqi) – Waan ku jeclahay xabiibi, gacaliso, waa erayo qurux badan laakin ma ahan erayo kedis ah qaasatan erayo sarbeeb ah oo qalbiga toos
Cishqi Team July 10, 2021
Shan kamid ah calaamadaha ninka wax jecel, maxaa lagu gartaa ninka xaaskiisa jecel, muxuu kaga duwan yahay raga kale, Jawaabtu waa mid fudud. Waa Maxay
Cishqi Team July 8, 2021
Geeraar Caashaq Qaasatan Mid Soo Jiidasho Leh
Sida loo qoro geeraar amaan ah qaasatan geeraar caashaq oo soo jiidasho leh ma ahan wax adag, isticmaal geeraaradaan oo ah geeraaro caashaq ah. Ma
Cishqi Team July 3, 2021
Kasbashada Qalbiga Ninka Ma Ahan Wax Adag
Kasbashada qalbiga ninka, sameey sidaan si aad u soo jiidato ninkaaga, Inaad barato hanashada qalbiga ninka ma ahan sida cilmiga nukleyrka – Cishqi. Waa maxay
Cishqi Team June 19, 2021
Sidee loo qoro dhambaal jaceyl 2021 ama dhambaal caashaq gaar ahaan dhambaal jaceyl oo xiiso badan? Jawaabtu: Weey fududahay. Hadaba sidee? Of course markuu caashaq
Cishqi Team May 30, 2021
Cishqi jaceyl gaar ahaan cishqi Iyo colaad, markuu cishqi ku hayo waa ka duwan tahay dadka kale, Barwaaqo Qalanjo iyo cishqi tamaashaa xalqooyinka 10, 20,
Cishqi Team May 17, 2021
Jaceylka Dhabta Ah Iyo Calaamadaha Lagu Garto
Waa maxay calaamadaha jaceylka dhabta ah, maxaa lagu gartaa qalbi si dhab ah kuu jecel misana daacad kuu ah, hadaba baro maanta oo wax ka
Cishqi Team May 12, 2021
Gabadha ku jecel waaa gabar ka duwan gabdhaha kale
Sidee ku ogaan ku ogaan kartaa gabadha ku jecel, Waa maxay calaamadaha lagu garto gabadha ku jecel? Jawaabta weey fududahay: Raac 12 kaan calaamadood. Sida
Cishqi Team May 9, 2021
4 thoughts on “Arimaha Jaceylka”
Ck cali carab
Waxaan rabaa erayo soo jiidasho.leh
Mahadsanid walaal! Waan kula wadaagi dooonaa mar dhaw insha Allah.
Waad mahadsantihiin walaayaaal
Mageceygu waa Omar Hassan
Masha allah waad ku mahadsantihiin
Erayo qurux badan oo qalbiga u roon m.a